❤️ Instagram မှာ Influencers တွေကို ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ - Winches ကလပ်
မင်းက Instagram မှာမင်းရဲ့နယ်ပယ်မှာနာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်တွေနဲ့သြဇာရှိသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်, ပစ်ခတ်ခံရခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်သင်သိသင့်သောအချက်အချို့ရှိပါသည်.
တက်ကြွသော Instagram အသုံးပြုသူသန်းတစ်ထောင်ကျော်ရှိသည်, မင်းကသြဇာကြီးသူဒါမှမဟုတ်နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုနဲ့ဒီပူးပေါင်းမှုကိုရချင်ရင်, သင်ထင်ထင်ရှားရှားနှင့်သင်သေချာကြားရမည်. Instagram သည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရန်နှင့်သင်၏လူမှုမီဒီယာနှင့်စီးပွားရေးတည်ရှိမှုကိုမြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။.
ဤဆောင်းပါးသည်လူတို့၏အာရုံကိုဖမ်းစားရန်နှင့်သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားလာစေရန်အကောင်းဆုံးချဉ်းကပ်ပုံအကြောင်းဖြစ်သည်။. အချို့ကိုသတိရပါ ကြီးမားသော Instagram အကောင့်များ နေ့စဉ်မက်ဆေ့ခ်ျရာပေါင်းများစွာကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်, ထို့ကြောင့်၎င်းတို့အားချက်ချင်းထွက်ဆွဲထားရန်အရေးကြီးသည်.
အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်လွှမ်းမိုးသူများ Instagram ကိုဆက်သွယ်ပါ
သင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောအကောင့်များအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိရန်စီစဉ်ပါက, မင်းရဲ့အရွယ်အစား (သို့) ဒီအရွယ်အစားဘယ်အရာမဆို, သင်အောက်ပါတို့ကိုပြုလုပ်ရလိမ့်မည်:
မှန်ကန်သောလူကို ဦး တည်ပါ – မင်းကိုစိတ်မဝင်စားတဲ့သူတွေ၊ မင်းအမှတ်တံဆိပ်ပုံရိပ်နဲ့မင်းရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့မကိုက်ညီတဲ့သူတွေကိုမက်ဆေ့ခ်ျပို့တာဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး
သူတို့ကိုတန်ဖိုးထားပါ – လူတော်တော်များများကသူတို့အောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အရာတွေကိုအာရုံစိုက်နေကြတယ်, သူတို့ဆီကိုဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲဆိုတာကိုအာရုံစိုက်မယ့်အစား
ငြင်းပယ်ခြင်းကိုလက်ခံပါ – သင်မက်ဆေ့ခ်ျတွေအများကြီးပို့ရတော့မယ်၊ သူတို့တော်တော်များများသူတို့ရဲ့အမှတ်အသားကိုလွဲသွားလိမ့်မယ်, ထို့ကြောင့်ငြင်းပယ်ခြင်းကိုလက်ခံရန်ပြင်ဆင်ပါ
ဆက်ကပ်အပ်နှံပါ – သင်အရှုံးမပေးဘဲ၎င်းကိုဆက်လုပ်ရမည်, အဆက်မပြတ်ငြင်းပယ်ခံရခြင်းနှင့်မသိနားမလည်မှုတို့၌ပင်သင်မည်သို့ရှေ့ဆက်ရမည်ကိုအခြေခံစိတ်ကူးရှိသည်, အသေးစိတ်ကိုစလိုက်ရအောင်.
မှန်ကန်သောလူကို ဦး တည်ခြင်း
အကောင်းဆုံးရလဒ်ကိုရယူနိုင်ဖို့ပါ, မင်းရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့အကောင့်တွေကိုပစ်မှတ်ထားလိမ့်မယ်. မကြာသေးမီကငါတို့ရဲ့နယ်ပယ်မှာအကောင့်သစ်တွေကိုဘယ်လိုမြန်မြန်ရှာနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုငါတို့ထုတ်ဝေခဲ့တယ်။, အကောင့်များစွာကိုစီမံခန့်ခွဲလိုလျှင်ဒါကြောင့်မြန်မြန်ဖတ်ပါ.
သင်သည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောချဉ်းကပ်နည်းကိုသုံးနိုင်သည်, အပေါ် hashtag တစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည် ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့နယ်ပယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တည်နေရာနဲ့အဆက်အသွယ်တွေကိုတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့အကောင့်တွေကိုပြန်သုံးသပ်ပါ. ဒါလုပ်နေတာ, Follower အရေအတွက်အတွက်အရမ်းစိတ်မပူပါနဲ့, ဒါပေမယ့်ပါဝင်မှုနှုန်းနဲ့အကြောင်းအရာရဲ့အရည်အသွေးကိုအာရုံစိုက်မယ့်အစား.
ရာပေါင်းများစွာသောမက်ဆေ့ခ်ျတွေပို့မယ့်အစားတူတာကိုပဲတောင်းပါ, အဲဒီ့အစားဒီအကောင့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့တိုးအောင်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုရှာကြည့်ပါ. သူတို့အားအကြောင်းအရာများပေးခြင်းကဲ့သို့လွယ်ကူစေနိုင်သည်, သူတို့ကိုနမူနာပို့ပါ, သို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုအပြန်အလှန်မြှင့်တင်ရေးပုံစံမျိုးဖြင့်ကမ်းလှမ်းပါ.
သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက် (သို့) Facebook ကဲ့သို့အခြားပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်အွန်လိုင်းနောက်လိုက်များစွာပါ ၀ င်လျှင်ဤနောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုသည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။, ဒါပေမယ့်မင်းက Instagram ပေါ်မှာကွဲတယ်. သူတို့ကိုတစ်ခုခုတောင်းတာထက်သူတို့ကိုပိုတန်ဖိုးပေးပါ, ပြီးတော့ဒီအကောင့်တွေကမင်းရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပိုကိုက်ညီတာကိုမင်းတွေ့နိုင်တယ်.
မင်းဘယ်နေရာကိုမှမသွားခင်မင်းစာတွေအများကြီးပို့ဖို့လိုလိမ့်မယ်, ငြင်းပယ်မှုများစွာနှင့်ပိုလျှစ်လျှူရှုထားသောပို့စ်များလည်းရှိလိမ့်မည်. အဓိကကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရမယူဖို့ဘဲ, သင်မကောင်းသောအချိန်၌၎င်းသူတို့ကိုလက်ခံရရှိပေမည်, သူတို့ကမက်ဆေ့ခ်ျတွေအများကြီးလက်ခံရင်, သူတို့ကမင်းရဲ့အထွေထွေမန်နေဂျာကိုတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး. နံပါတ်များနှင့်ကစားရန်ကြိုးစားပါ၊ ငြင်းပယ်ခံရခြင်းကိုသင့်အားမထိခိုက်ပါစေနှင့်, လူတွေကသင့်ကိုမတုံ့ပြန်ခင်အချိန်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မယ်.
ယခင်အပိုင်းကိုလိုက်ကြည့်သည်, သင်မက်ဆေ့ခ်ျတွေအများကြီးပို့ဖို့လိုပြီးသင်လုပ်နိုင်တာကတော့အရေးအကြီးဆုံးအရာကမင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာစေ့စပ်နေဖို့ပါပဲ. သင့်တောင်းဆိုမှုကို တစ်စုံတစ်ဦးမှ မတုံ့ပြန်မီ မက်ဆေ့ခ်ျ 100 ပေးပို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။, သို့မဟုတ် 1000 ပင်ဖြစ်နိုင်သည်။, ဒါပေမယ့်အဲဒါကအမြဲတမ်းအဆုံးမှာအမြဲဖြစ်နေတာကြောင့်အရေးမကြီးပါဘူး.
ကောင်းသောအရာဖြစ်၏, မင်းအိတ်ထဲမှာလက်တွဲမှုရှိပြီဆိုတာနဲ့ဒါပဲ, အခြားသူများကိုရယူရန်သင်၏အားသာချက်ကိုသင်သုံးနိုင်သည်. မင်းရဲ့ဖောက်သည်တွေကိုပြောပြနိုင်တယ် : “ငါဒီပရောဂျက်မှာဒီဖောက်သည်နဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်, မင်းလည်းပါဝင်ဖို့ငါမျှော်လင့်ခဲ့တယ်”.
၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသူတစ် ဦး ဖြစ်နိုင်ပြီးသင့်အားလူများစွာကိုစိတ်ဝင်စားစေနိုင်သည်။, သင်၏ကွန်ယက်လှုပ်ရှားမှုများတွင် snowball သည်အဘယ်အရာပြုလုပ်နိုင်သနည်း.
ယခင်ဆောင်းပါးInstagram Hashtag ရှာဖွေရေးကိရိယာ
နောက်ဆောင်းပါးတစ်ယောက်ယောက်ကမင်းကို Instagram မှာဟန့်တားခဲ့ရင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ